Waa Maxay Top The 8 Dheriwadaag In Italy | Save A tareenka
Home > Tareen Safar Talyaani > Waa Maxay Top The 8 Dheriwadaag In Italy
Reading Time: 5 daqiiqo(Last Updated On: 07/06/2020)
Taas oo meel ka wanaagsan in ay ku raaxaystaan ​​pizza badan dalka in ay soo hindiseen, xaq u? jacaylka Talyaaniga, jeclahay, jecel this hadhuudhka fudud-jeestay delicious! No dheriwadaag yaab in Italy ay yihiin qaab saafi ah oo farshaxanka jeestay, iyo ugu dambeyntii waa UNESCO-ansixiyey!
Barqiyey agagaarka Italy, waxaad ka heli doontaa pizzerias furay qarnigii 18aad laakiin sidoo kale kuwa cusub, iyadoo hab gebi cusub dubista. Waxaa jira boqolaal noocyo ka mid ah fursadaha saldhig, kOOsaaR, tirada, iyo dhadhan. asal ahaan, ma waxaad ka boodi kartaa adigoo pizza ugu yaraan hal mar inta lagu guda jiro booqashadaada this qurux Mediterranean dalka… okay? Good. Xitaa haddii aadan taageere pizza ah, dabaakhyo Talyaani heli doonaa in aad ra'yigaaga beddesho
Our liiska idin siin doonaa makhaayadaha u oolli-jirin ee Rome, Milan, Florence, Naples, iyo Verona. Halkan waxaa ku qoran sare ee 8 dheriwadaag ee Italy.
FIIRO GAAR AH: Ha iloobin in aad download oo dhan Chine safarka super waxtar leh hor inta aanad bilaabin safarkaaga.
Da Vittorio in Trastevere, Rome: Pizza la marooji ah adventurous
At qaado this of dheriwadaag In Italy, aad ka qayb qaadan kartaa in ururinta "Tre Colori Pizza." Saddex maaddooyinka basbaas kala duwan u samaysaa cas a, caddaan iyo pizza cagaaran, sida ku Talyaani calanka. Isku day in aadan ha basbaaska jalapeno ah, bolse Sicilian basbaaska, iyo dhanaan cheese cad afkaaga ku gubtaa. Haddii aad ku dhameysan pizza oo dhan ee 10 daqiiqo ama wax ka yar aad ku guuleysan abaalmarinta a. Waxa intaa dheer in qaanuunkan, waxa kale oo aad Iskuma wada cabbi kartaan badan 16 waqiyad oo biyo ah ama biirka. Ku guuleystaha helo cuntada lacag la'aanta ah, a t-shirt iyo sawir posted on derbiga of fame. Oo, waxa dhacaya haddii aadan ka dhigi? Waxaad mar walba mar kale isku dayi kartaa, sidaas xusuusan meeshan marka aad safarka si Rome.
Pizzeria Da Attilio, Naples: True Kind ee Pizza
Bal aan ka bilowno our sheeko ku saabsan dheriwadaag ee Italy ay la aasaaska qaar ka mid ah. Talyaaniga badan oo fiirsan Margherita nooca kaliya oo run ah pizza. Just a waxyaabaha cusub iyo Howka yar waa u samaysaa saxan la yaab leh, sida muuqata. Oo marka ay timaado Da Attilio ee Margherita, waa ay saxan yihiin. cajiinka oo macmal ah, Maraqa yaanyo cusub, saliid saytuun ah, iyo moosarellada cusub yihiin oo dhan waxaad u baahan tahay. Haddii afkaaga waxaa waraabiyo sida aad this reading, Da Attilio waa meel aad u. U hubso in aad iska baarto halka sahaminta magaalada Naples.
dhadhan, Verona: Art of Samaynta Doe
Sapore waa meel aad ka heli kartaa kala duwan ugu ballaran ee cajiinka oo tayo sare leh in mid ka mid makhaayad kaliya. Renato Bosco, maleegay ee qaado this of dheriwadaag In meel Italy, waxaa loo arkaa mid ka mid ah sameynta kibis ugu fiican Italy ee khubaro. Tan waxaad ka heli kartaa badan oo Hababka kala duwan ee dheriwadaag halkan, waxa weyn ayay ahaan laheyd in aad weydiisato menu degustation a. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa inay ku weyddiiso wax ku saabsan fursadaha saldhig oo kala duwan ka hor inta aadan go'aan kama dambays ah. Vegans inta badan jecel dalab Sapore ayaa tan iyo markii uu leeyahay tiro badan oo dheriwadaag u dhigma doorbidayaan.
Milan in ay Tareenadu Verona
pizzeria Brandi, Naples: Waxaa ka mid ah dheriwadaag Best in Italy Tan iyo Qarniga 18aad
Pizzeria Brandi soo waramayaa inuu mas'uul ka Cukuse muddada Pizza Margherita. Waxay magaca this si qaaday Boqoraddii isku magaca maamuuso. Dabcan, pizza la mid ah maaddooyinka isku jirtay ka hor inta, laakiin wadata magac this ka dhigay mid taariikhi ah in caalamka pizza ah. Pizzeria Brandi taariikhda in ay dib ugu 1870 marka ay ku shaqeeya magaca of Pizzeria di Pietro. The dhaqanka iyo sheekada meeshan ka dambeeya ayaa ka dhigtay in ay ka mid Talyaaniga oo caan ah iyo dalxiisayaasha. Taasi waa sababta badnaa weli halkan ururin gaajaysan, waayo, jeex ah ku farxaa Boqorad-magacaabay.
Rimini in Tareenadu Naples
Siena si Tareenadu Naples
Venice in Tareenadu Naples
Pisa in Tareenadu Naples
A xoogaa qaali ah waayo, meesha pizza ah, laakiin gudaha iyo goobta sameeyo qiil biilka weyn. Si kastaba ha ahaatee, pizza waa delicious aad. pizzeria waxaa loogu talagalay kuwa qabaa baxsan diilinta. maaddooyinka Xadgudbayaasha aad ka doodid doonaa in ay isku dayaan wax cusub oo aan caadi ahayn, sida pizza leh berde ah ama cuntada badda. Mar labaad, menu degustation waa halkan doorashada weyn, tan iyo ma fududa inay go'aansadaan waxa lagu soo qaado. Intaa waxaa dheer, ka duwan ugu dheriwadaag kale ee Italy, Kanu waa u fududahay in la dheefshiido.
Il Trapizzino, Rome: Wax yar kala duwan
Il Trapizzino waa yaab dhab ah lover kasta oo pizza. Imaanayn in dheriwadaag kale ee Italy, dheriwadaag halkan eegto sida ismaris xagalka ah. Qaar ka mid ah iyaga ugu yeedho dheriwadaag cufan. Inside kuwaas saddexagal cufan waxaad ka heli kartaa waxyaabaha sida digaag caadka, eggplant iyo carsaanyo cas. cajiinka waa mid aad u iftiin, taas oo kuu ogolaanaya in aad cuni laba ama saddex xabbadood. yar Tani, meel raaxo leh ee xaafadda ee Testaccio waxaa had iyo jeer ka buuxeen dadka. Sidaas fiican inaad u samaysaa Boos ugu yaraan dhawr saacadood ka hor.
Trieste in Tareenadu Rome
Siena si Tareenadu Rome
La Spezia in Tareenadu Rome
Pizza AM, Milan: Meel aad cuni kartaa in ay shidaal dheriwadaag In Italy
Tani waa mid ka mid ah dheriwadaag-ugu wanaagsan ee loo yaqaano In Italy iyo waa in Milan. Sayidka, ha la yaabin haddii aad aragto line a dadka ku sugaya baxsan dukaanka. Calaamaadka kugu tahay wax caadi ah in Pizza AM. Tan iyo markii ay ma dooneysid inaad si ay u tagaan meel kale, Milkiilayaasha siin doonaa jeex pizza yar inta aad sugayso. Waxaad ka heli kartaa hal galaas oo cad Talyaani khamri sidoo kale. Waxay leeyihiin menu yar, iyada oo keliya 3 noocyada kala duwan ee pizza. Hey, ma aad walwasho – oo kulligoodna waa wada cajiib ah, sidaa darteed ma waxaad dareemi doontaa sida aad ka maqan oo dhan.
Trieste in Tareenadu Milan
Perugia in Tareenadu Milan
Khaasatan Organic Pizza, Florence: Healthy A Qaado on dheriwadaag In Italy
Haddii aad raadinayso a gluten free-dheriwadaag In Italy, Khaasatan ee Organic Florence waa magaca waa inaad xusuusataan. Sidoo kale waxaa jira dhawr fursadood oo midebkooda, laakiin guud, pizza kasta oo dhadhan cajiib ah! Wax walba waxaa laga sameeyey maaddooyinka organic, samaynta this pizza yara ka caafimaad badan kuwa kale. cajiinka waa mid aad u qaro weyn, taas oo laga yaabo in dib markii dhadhankii qof. laakiin – qof kasta waa jeclaan doonaa buuxintii barwaaqaysan oo aad meel kaga dhacay in la cuno pizza oo dhan! Haddii aad ku wada cuni karin, santuuq waxa ka hadhay oo u badbaadin doonaa, waayo, berri. Waxaa weli dhadhamin doonaan delicious.
Sidaas daraaddeed waxaa aad u leedahay. Tani waxa ay ahayd doorasho oo ka mid ah dheriwadaag sare ee Italy our. Sidaas maqaayado badan in ay soo booqdaan, iyo kala duwanaanta badan oo kala duwan ay u dhadhamiyaan! Si kastaba ha ahaatee, kuwanu waxay ahaayeen oo keliya soo jeedin. Hubaal waad ka heli kartaa badan meelaha more leh pizzas dhadhan fiican leh agagaarka Talyaaniga naftaada. Haddii aad u baahan tahay caawimaad kasta oo go'aan kaas oo jidka yahay ugu wanaagsan ee u safraya Italy, na soo booqan www.saveatrain.com. Waxaan ka badan ku faraxsan noqon doonaa si ay u caawiyaan! Boorso aad tareenka safri daruuriga pre-safarka, na siin call a, oo ha u quudhin bilaabaan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link(www.saveatrain.com) si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-8-pizzas-italy/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / in ay / TR ama / fr iyo luuqado badan.
#italypizza #pizza #dheriwadaag Italy travelitaly